Real Madrid oo diyaar u ah inay iska iibiso xiddig la la xiriirinayo Kooxda Manchester United – Gool FM
Real Madrid oo diyaar u ah inay iska iibiso xiddig la la xiriirinayo Kooxda Manchester United
Haaruun June 9, 2021
(Madrid) 09 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la soo warinayaa inay diyaar u taha inay 50 milyn oo euro ku iibiso daafaca la la xiriirinayey Naadiga Manchester United ee Rafael Varane.
Jariiradda Mundo Deportivo ayaa warinaysa in Kooxda Real Madrid ay diyaar u tahay inay iibiso daafaceeda dhexe ee Rafael Varane, kaasoo la la xiriirinayey naadiga Manchester United, waxaana Los Blancos la warinayaa inay ku iibin doono Adduun dhan 50 milyan oo euro oo u dhiganta 43 milyan oo gini ama 61 milyan oo dollar.
Kooxda lagu naynaaso Los Blancos ayaa doonaysa inay lacag kaas ah ku hesho xiddigan 28-sano jirka ah ka hor inta uusan beeca xorta ah uga tagin sanadka 2022-ka, maadaama weli ay meel u dhici la’dahay wadahadallada heshiis kordhinta ee ay doonayso kooxda cad-cadka.
Man United ayaa diyaar u ah inay lasoo wareegto daafacan, iyadoo lagu soo warramayo in Varane lagu wado in loo soo bandhigo heshiis 12 milyan oo gini ah oo uu sanadkii ku qaadanayo garoonka Old Trafford.
Kooxda Barcelona oo qorsheynaysa inay la soo saxiixato xiddiga Manchester City ee Raheem Sterling
Kooxda Barcelona oo isku diyaarinaysa inay iska iibiso xiddigo ay ka mid yihiin Griezmann & Dembele si ay gacanta ugu soo dhigto Weeraryahanka...